မန်းတလေးဂေဇက်က ဂုဏ်ပြုဖို့ မေ့နေသော ရွာသား ဟီးရိုးတစ်ဦး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန်းတလေးဂေဇက်က ဂုဏ်ပြုဖို့ မေ့နေသော ရွာသား ဟီးရိုးတစ်ဦး
မန်းတလေးဂေဇက်က ဂုဏ်ပြုဖို့ မေ့နေသော ရွာသား ဟီးရိုးတစ်ဦး
Posted by မောင် ပေ on Jul 29, 2012 in Creative Writing, Think Different | 59 comments
ကိုဘလက်ချော အား ဂုဏ်ပြုခြင်း
အင်တာနက် အမြဲသုံးတဲ့ အသိတစ်ယောက်နဲ့လဘက်ရည်အတူထိုင်သောက်ကြရင်း
ရောက်တတ်ရာရာ ဘာညာသာရကာ….( နေကြာကွာစေ့ မပါဘူးဗျို့ ) ပြောဆိုဖြစ်ရင်း
အဆိုပါ အသိရဲ့ဆန္ဒတစ်ခု ကို ကြားသိခဲ့ရပါတယ် ။
သူ့ ဆန္ဒ က မန်းတလေး ဂေဇက်မှာ မန်ဘာဝင်ပြီး စာရေးချင်တယ်
နောက်ပြီး မန်းတလေး ဂေဇက်ဝင် မန်ဘာများရဲ့ ချစ်ခင်လေးစားယုံကြည်မှု ကို လဲ လိုချင်တယ်ပေါ့
ဒါနဲ့ .. ကျွန်တော့် ကို
“ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ” လို့မေးလာပါတယ်
ကျွန်တော်တောင် ဂေဇက်မှာ ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ အဆဲခံ ၊ အမြင်ကပ်ခံ ၊ လူမုန်းခံ ပြီး
ရေးချင်ရာရေးနေတဲ့ကောင် ဆိုတော့ ၊ သူ့ မေးခွန်းကို တန်းမဖြေနိုင်ခဲ့ပါဘူး..။
သို့ သော် အမေးရှိရင် အဖြေရှိရမယ် လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော် ဟာ ၊ အဆိုပါ ကျွန်တော့် အသိအတွက်
ခေါင်းပူအောင် စဉ်းစား ၊ အချက်အလက်တွေ ပြန်ရှာပြီး ၊ လက်ရှိ ကျွန်တော် နဲနဲပါးပါး လေ့လာမိနေတဲ့ ၊
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ အတိုင်ပင်ခံလုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာသမားတစ်ယောက် ၊ သူအချိန်ရတိုင်း ကျွန်တော့်ကို သင်ပေးနေတဲ့ ““ လူပေါင်းသင်းပညာရပ် ”” ဆိုတာရယ် ၊ ““ diplomacy ”” ဆိုတာရယ် ….
ဖတ်ဖြစ်နေတဲ့ စာရေးဆရာ ““ ဥာဏ်ဝင်း (ဇီးကုန်း) ”” ရဲ့ မော်ဒန်ဒီပလိုမေစီ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာရယ် ….
( စာရေးဆရာ ဥာဏ်ဝင်း (ဇီးကုန်း) ရေးတဲ့ “ မော်ဒန်ဒီပလိုမေစီ ” စာအုပ် ကို
“ စိုးမိုးအောင်မြင်စာပေတိုက် ” က ထုတ်ဝေပြီး တန်ဘိုး ၃၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ် ။ )
နောက်ပြီး မန်းတလေးဂေဇက်က ၊ အားလုံးပဲ ခင်မင်နေကြတဲ့ ကိုဘလက်ချော ရဲ့ပို့ စ်အဟောင်းများ ကို ပြန်လည် ရှာဖွေ လေ့လာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့
ကျွန်တော့် အသိမိတ်ဆွေ အတွက် အဖြေပေးစရာ ရလာပါတယ် ။
အဆိုပါ အကြောင်းများကို ပို့ စ်တစ်ခု အဖြစ် ရေးပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ( မှတ်ချက် ကျွန်တော့် တင်ပါး မဟုတ်ပါ )
ကိုဘလက်ချော ဟာ မန်းတလေးဂေဇက် ရဲ့ ဟီးရိုးတစ်ယောက်ပါ
ဇွန်လိုင်လအတွက် တင်ထားတဲ့ ချိုပေါ့ကျ ပို့ စ်အပါအဝင်ဆိုရင် မန်းတလေးဂေဇက်မှာ ကိုဘလက်ချော ရဲ့ပိုစ့်အပုဒ်အရေပေါင်း ၂၀၀ ပြည့်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကိုဘလက်ချော ဆိုတာ ကျွန်တော့် အစ်ကိုတစ်ယောက် အရွယ် လဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုဘလက်ချော မန်းတလေးဂေဇက်မှာ လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်း ၊ ကိုဘလက်ချော ရဲ့စာဖတ်အား ၊ ကိုဘလက်ချော ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်း ၊ ကိုဘလက်ချော ရဲ့ strategy ၊ အားလုံးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့သည်ပို့ စ်ကို ရေးပါတယ်…
ကျွန်တော် သူ့ ပိုစ့်တွေ ကို လက်လှမ်းမှီသလောက် ပြန်လေ့လာ
ပြန်ဖတ်ပြီး စုစည်းထားတာပါ ။
သဂျီးရဲ့ ဆာဗာအနေအထားကြောင့် ၊ ကျွန်တော်တို့ လို စာဖတ်သူတွေ အနေအထားနဲ့ကိုဘလက်ချော ရဲ့ ပို့ စ်အားလုံးကို ပြန်ဖတ်လို့ မရပါဘူး ။ ဒီအတွက် တချို့ ကျန်နေသေးတဲ့ ၊ ကျွန်တော် ရှာလို့ မရတဲ့ ၊ ကိုဘလက်ချော ပိုစ့်တွေ ကို မဖတ်ဖြစ်လို့ ၊ ကျန်ခဲ့တာတွေ ၊ ထည့်မရေးဖြစ်တာတွေအတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူကြပါ ။
ကိုဘလက်ချော ကျန်းမာပါစေ ….
ကျွန်တော် ဒီပို့ စ်ကို ရေးတင်နိုင်ဖို့ အတွက်
ကျွန်တော့် ဆရာသင်ပေးနေတဲ့ လူပေါင်းသင်းပညာ ၊ ဒီပလိုမေစီ ၊ စာရေးဆရာဥာဏ်ဝင်း(ဇီးကုန်း) ရဲ့ မော်ဒန်ဒီပလိုမေစီ စာအုပ် တို့ ကို မှီငြမ်းပြီး ၊ google ကနေ သိလိုသည်များကို ရှာရင်း ၊ မှီငြမ်း စုစည်းထားတာလေးတွေပါ ။
ဝီကီပီးဒီယာ ထဲမှာတော့ ဒီပလိုမေစီ ကို ဒီလို ဖွင့်ထားတယ်ဗျ
“““ Diplomacy (from Latin diploma, meaning an official document, which in turn derives from the Greek δίπλωμα, meaningafolded paper/document) is the art and practice of conducting negotiations between representatives of groups or states. It usually refers to international diplomacy, the conduct of international relations through the intercession of professional diplomats with regard to issues of peace-making, trade, war, economics, culture, environment and human rights. International treaties are usually negotiated by diplomats prior to endorsement by national politicians. In an informal or social sense, diplomacy is the employment of tact to gain strategic advantage or to find mutually acceptable solutions toacommon challenge, one set of tools being the phrasing of statements inanon-confrontational, or polite manner.
The scholarly discipline of diplomatics, dealing with the study of old documents, derives its name from the same source, but its modern meaning is quite distinct from the activity of diplomacy. ”””
– စာရေးဆရာ ဥာဏ်ဝင်း(ဇီးကုန်း) ရဲ့မော်ဒန်ဒီပလိုမေစီ စာအုပ်ထဲမှာတော့
သံခင်းတမန်ခင်း (diplomacy) ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံအချင်းချင်းအကြား ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုမျိုးဖြစ်သည့် အပြင် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံမဟုတ်သူ လူပုဂ္ဂိုလ် / အဖွဲ့ အစည်းအကြား ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှု တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်သည် ။ ( စာမျက်နှာ ၂၀ )
ကျွန်တော်မောင်ပေ အလုပ်အားတဲ့ အချိန်လေး စာရေးစာဖတ်ရင်းနဲ့ ၊ ညီအစ်ကိုလို ခင်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဆီကနေ လူပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး နဲ့ ၊ ဒီပလိုမေစီ ဆိုတာကို သင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒါအပြင် ထပ်မံလေ့လာဖို့ ၊ စာရေးဆရာ ဥာဏ်ဝင်း(ဇီးကုန်း) ရဲ့ စာအုပ်ကို ညွှန်းလာတဲ့အတွက် ၊ ထိုစာအုပ်ကိုပါ ထပ်မံဖတ်ရှုလေ့လာရပါတယ် ။ အင်းဂလိပ် လို လေ့လာဖို့ ကြတော့ ၊ အင်းဂလိပ်စာကိုအားနဲတဲ့အပြင် ဒစ်ရှင်နရီကိုင်ပြီး ဘာသာပြန်ရတာကိုလဲ ပျင်းမိတဲ့အတွက် ၊ ဗမာလို ရေးတာကိုဖတ်ရတာဘဲ ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်ပြေပါတယ် ။
လူပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ ဒီပလိုမေစီ ကို လေ့လာသင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာ… လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခင်မင်ယုံကြည်အားကိုးမှု ၊ လေးစားမှုတွေ ကို ဘယ်လို ရှာယူရမလဲ ဆိုတာတွေကို သိလာရပါတယ် ။
သည်ပို့ စ်မှာ ကျွန်တော် အင်ထရို ရေးခဲ့တဲ့ လဘက်ရည်သောက်ဖက် မိတ်ဆွေ ကို ရှင်းပြနိုင်စရာ အဖြေ ထွက်လာပါတယ် ။ သူမေးထားတဲ့ လူတွေရဲ့ ချစ်ခင်ယုံကြည်ခင်မင်မှုကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ ဘယ်လို လုပ်ယူရမလဲ ဆိုတာကို ဥပမာကောင်းကောင်းကြီးပြစရာ ၊ ကိုဘလက်ချော တစ်ယောက်ကို ပဲ ပြေးမြင်မိပါတယ် ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ မန်းတလေးဂေဇက် မှာ ကိုဘလက်ချော ဟာ ခဏလေးအတွင်းမှာ လူချစ်လူခင်ဖြစ်သွားတဲ့ ဟီးရိုး တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ ပါဘဲ ။
ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေကလဲ မန်းတလေးဂေဇက်ကိုဝင်မှာနဲ့ ၊ အခု ကျွန်တော် ကိုဘလက်ချော ကို ဂုဏ်ပြုရင်း ကိုဘလက်ချော လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းအကြောင်းကို ရေးသားဂုဏ်ပြုမှာနဲ့ မိတ်ဆွေအတွက် အဖြေဟာ ကွက်တိပါဘဲ ။
ကိုဘလက်ချော ဟာ မန်းတလေးဂေဇက်မှာ ပထမဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ ပို့ စ်ကိုတော့ ကျွန်တော်လဲ မမှတ်မိတော့ပါဘူး ။ ကိုဘလက်ချော ကိုယ်တိုင် ဒီပို့ စ်ထဲမှာ လင့်ခ်လေးတွေ လာပေးရင်တော့ ကောင်းပါတယ် ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ .. ကိုဘလက်ချောဟာ မန်းတလေးဂေဇက် က ရွာသူားတွေ တင်သမျှ ပို့ စ်တိုင်း ကို သူဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကို သူ သက်သေပြပါတယ် ။
တစ်ပတ်အတွင်း တင်သမျှ ပို့ စ်တိုင်းကို မလွတ်တမ်းဝင်ဖတ်ပြီး ၊ ပို့ စ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ပို့ စ်ပိုင်ရှင် ပေးချင်တဲ့ အိုင်ဒီယာ (သို့ မဟုတ်) ကဗျာ မျိုးဆိုရင် ကဗျာထဲက အလှဆုံးစာသား ၊ ဝတ္ထုတို ဇါတ်လမ်းတို မျိုးဆိုရင်လဲ ၊ စာထဲပါအကြောင်းအရာထဲက အလန်းဆုံး စာသား ကို ဆွဲယူပြီး မှတ်သားလိုက်ပါတယ် ။
အားလုံးကို စုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတော့ ၊ ကိုဘလက်ချောဟာ ပို့ စ်တစ်ခု အနေနဲ့ ရေးတင်လိုက်ပါတယ် ။
ဒီတစ်ပတ်ဖတ်ခဲ့တာတွေကတော့ ဆိုပြီး ၊ ဘယ်သူက ဘယ်ပို့ စ်မှာ ဘယ်လိုလေးရေးတာ အရမ်းကောင်းတယ် ၊ ဘယ်သူကတော့ ဘယ်ကဗျာလေးရေးတာ ဘယ်လို ခံစားရတယ် ဆိုပြီး အနှစ်တွေ ကို စုပြီး တင်ပေးပါတော့တယ် ။
ကိုဘလက်ချောရဲ့ စုစည်းပေးမှုကို ခံကြရတဲ့ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်များမှာလဲ အားရဝမ်းသာကျေနပ် ဖြစ်ကြရပါတယ် ။
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ၊ တချို့ ပိုစ့်တွေဆိုရင် ဖတ်တဲ့လူနည်းတာကိုး ၊ တချို့ ကြတော့လဲ တစ်ကယ်ကို ရေးထားတာကောင်းပေမယ့် ၊ မန်ဘာနာမည်ရယ် ၊ လူသိနဲတာရယ်နဲ့ ကြတော့ ၊ တင်တဲ့ ပို့ စ်ကို အားပေးခြင်း မခံကြရရှာဘူး ။ အဲဒါကို သိနားလည်နေတဲ့ ကိုဘလက်ချော က စာပေါင်းစုံကို သေချာဖတ်ပြီး အကောင်းမြင် သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ ပြန်စုပေးလိုက်တော့ ကိုဘလက်ချောကို ဝိုင်းပြီး ကျေးဇူးတင် ခင်မင်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာကြပါတယ် ။
ကိုဘလက်ချော တင်သမျှ ပို့ စ်တိုင်းမှာလဲ အမြဲတမ်းဝင်ရောက် ဖတ်ကြ ကွန်မင့်ပေးကြ ဖြစ်ကုန်ပါတယ် ။
ဒါဟာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနည်းပညာပါ ။
တစ်ဘက်လူ ဘာလိုချင်နေသလဲ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ ဆိုတာ ကို သိအောင် လုပ်ပြီး ၊ သူဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို ကိုယ့်ဘက်က ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း တစ်ဘက်လူ ရဲ့ အားကိုးမှု ခင်မင်မှု ၊ အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့လေးစားမှု ဆိုတာတွေကို ရယူလိုက်ခြင်းပါဘဲ ။
အဲဒီလိုနဲ့ ကိုဘလက်ချောဟာ တစ်ဖြေးဖြေး နာမည်ကြီးလာ အရှိန်ရလာပါတယ် ။ ရွာသူား အားလုံး နဲ့ လဲ ခင်မင်သွားပါပြီ ။
အဲဒီမှာ ကိုဘလက်ချော ထပ်မံ အသစ်ဖောက်တဲ့ လမ်းကတော့ ၊ ဂေဇက်က ပေါ်ပြူလာတွေ ရဲ့ပိုစ့်တွေ ကို စုစည်းပြီး မှ တစ်ဦးချင်းစီ ကို နာမည်တပ်ပြီး ပြန်လည်စုစည်းတင်ဆက်ခြင်းပါပဲ ။
ကိုဘလက်ချော ဟာ မန်းတလေးဂေဇက်က ပေါ်ပြူလာတွေ ရဲ့ပိုစ့်တွေကို ပြန်ဖတ်ပြီး တစ်ပိုစ့်ချင်းစီ ရဲ့link ထည့် ၊ ဘယ်ပိုစ့်မှာတော့ ဘယ်လိုရေးပြထားတာ ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံကောင်းတာ ဆိုပြီး စုစည်းတင်ဆက်မှု လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
ကိုဘလက်ချောရဲ့strategy လို့ သုံးချင်ပါတယ် ။
အောက်မှာရေးပြထားတာတွေကတော့ ကိုဘလက်ချော စုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ မန်းတလေးဂေဇက် က မန်းတလေးက လူတွေ ရဲ့ ပို့ စ်တွေ ကို စုပေါင်းပြီး အကောင်းမြင်စိတ် နဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ပြထားခြင်းတွေပါ ။
““ မန်းတလေးမြို့ ကို သိမ်းပိုက်ခြင်း ”” လို့ ကျွန်တော် ခေါင်းစဉ်တပ်ချင်ပါတယ် ။
မန်းသူမန်းသားတွေရဲ့ မန်းဂဇက် အပိုင်း (၁) – pooch
ဒါကတော့ မန်းတလေးကို သိမ်းပိုက်ခြင်း အစီအစဉ်ရဲ့ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းဖြစ်ပြီး ၊ ဒီပို့ စ်မှာ best comment ပေးဖို့ မေ့ခဲ့တယ် ထင်ပါတယ် ။
မန်းသူမန်းသားတွေရဲ့ မန်းဂဇက် အပိုင်း (၂ ) – TTNU
ဒီပို့ စ်ထဲမှာတော့ ဆရာမကြီး TTNU ရဲ့ ကွန်မင့် ကို best comment အဖြစ် ရွေးထားပါတယ် ။
အနီးဆုံးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ပို စိတ်ချရအောင် ထပ်မံချည်လိုက်တဲ့ အနေအထားလို့ သုံးသပ်မိပါတယ် ။
မန်းသူမန်းသားတွေရဲ့ မန်းဂဇက် အပိုင်း ( ၃ ) – DIAMOND KEY
ဒီပို့ စ်မှာလဲ “ ကိုစိန်သော့ ” ရဲ့ ကွန်မင့်ကို best comment ပေးထားပါတယ် ။
ဒါကတော့ မန်းတလေးဂေဇက်ရဲ့ မန်ဘာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မန်းတလေးဂေဇက်မှာ မတွေ့ ရတာကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ “hmee” တင်ခဲ့တဲ့ ပို့ စ်တွေကို
စုတင်ပေးရင်း မမှီဆီသို့ ခရီးစဉ်ပါ ။
“““ အစ္စရေးမှ မမှီကို နှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့် မြန်မာပြည်မှ မမှီကို ကြိုဆိုခြင်း ”””
ဒီပို့ စ်ထဲမှာလဲ ၊ မမှီ ရဲ့ ကွန်မင့် ကို best comment အဖြစ် ပေးရင်း ရင်းနှီးမှု ထပ်ယူထားပါတယ် ။
ဒါကတော့ မန်းတလေးဂေဇက် ရဲ့ သတ်ပုံစောင့် အပျိုကြီး MaMa ရဲ့ ပို့ စ်တွေ ကို ကိုဘလက်ချော ပြန်စုစည်းတင်ပေးထားခြင်းပါ
ဆိုတဲ့ရွာ့အခြေခံစည်းကမ်းမှာ.. စာလုံးပေါင်းစစ်ရန် လင်ခ့်က.. ရွာသူမမရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ထည့်ထားတာဖြစ်ပါကြောင်း…။
“““ မမ ရန်ကုန်သူ ”””
အပေါ်မှာ ပြန်ကူးပေးထားတဲ့ သဂျီးရဲ့ ကွန်မင့် ကို best comment ပေးထားပါတယ် ။
နောက်ထပ်လည်း ကိုပေါက်(မန်းတလေး) နဲ့ တခြား မန်းတလေးဂေဇက်ထဲက ရွာသူားများရဲ့ ပိုစ့်များကို ပြန်လည်စုစည်းထားတာတွေ ရှိနေသေးပေမယ့် ၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီလောက်ပဲ ပြန်ရှာလို့ ရတဲ့အတွက် ၊ ဒီလောက်ပဲ ပြန်စုတင်လိုက်ပါတယ် ။
အဲဒီလို ဂေဇက်က ပေါ်ပြူလာများရဲ့ ပို့ စ်များကို စုစည်းတင်ဆက်နေရင်းနဲ့ ကိုဘလက်ချောဟာ အပတ်စဉ် ဂျာနယ်များမှ ထူးခြားသော သတင်းများ အကြောင်းအရာများ ကို ပြန်လည်စုစည်းတင်ဆက်ထားတဲ့ “ ချိုပေါ့ကျ ” လို့ နာမည်ရ ပို့ စ်ပေါင်း နံပါတ် ၁၂ အထိ တင်ခဲ့ပါတယ် ။
မန်းတလေးဂေဇက်ကို မန်ဘာအသစ်ဝင်ချင်နေတဲ့ ညီငယ် ညီမငယ် အစ်ကို အစ်မ တို့ အနေနဲ့ ၊ မန်းဂေဇက်မှာ ဘယ်လို လည်ပတ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲ ဆိုတာကို သိကြလောက်ပါပြီ ။
ဒါဟာ အထိရောက်ဆုံး ၊ အမြန်ဆုံး အောင်မြင်မှု ရဖို့ အလွယ်ကူဆုံးသော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပညာရပ်တစ်ခုပါ ။
ကျွန်တော်မောင်ပေ က တော့
ကိုဘလက်ချော ကို ဂုဏ်ပြုရင်းနဲ့ 
ကျွန်တော် လေ့လာမိတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပညာ နဲနဲလေးနဲ့ 
ကိုဘလက်ချော ရဲ့ ပိုစ့်များကို ပြန်လည် စုစည်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား
ကျွန်တော့်ပိုစ့်မှာ လိုအပ်ချက်များ အများကြီး ကျန်နေဦးမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ အဆိုပါ လိုအပ်ချက်များကို စာဖတ်သူများက ကွန်မင့်များဖြင့် ဖြည့်စွက်ပေးခဲ့ရင် တဖြေးဖြေးနဲ့ ပိုပြည့်စုံလာလိမ့်မှာ အမှန်ပဲ လို့ လဲ ထင်မိကြောင်း ပြောရင်းနဲ့ … နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ် ။
တံခါးစောင့်ကြီးရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကလဲ နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်ပေဘူးလေဗျ …
ဆရာကြီး အဆင့်ပေပဲဗျ …
ဂုဏ်ပြုသင့် .. ဂုဏ်ပြုထိုက်ပါကြောင်း …။
ကိုပေရေ ကိုဘလက်ချောကို ဂုဏ်ပြုပို့ စ်နဲ့ အကို့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပညာကို
ကပေက ဦးဘလက်ကို သံအမတ်ကြီး ခန့်ချင်လို့လား။ အစိုးရမင်းများ တဦးတယောက်ကို မြှောက်ချင်ရင်ဖြစ်စေ၊ outချင်ရင်ဖြစ်စေ အဲဒီရာထူးပေးလေ့ရှိတယ်။ နင်အကြံကရော ဘယ်လိုလဲ။
အမည်တင် ချောတာ မဟုတ်ပါဘူး
လူကလဲ ရုပ်ချော သဘောကောင်း အပြောချို
သူက တစ်ရွာလုံးကိုချစ် သလို တရွာလုံးကလဲ ပြန်ချစ်ခံရတဲ့ သူပါ
ကိုဘလက်ငယ်ငယ် က ကျော်သူငယ်ငယ်က ရုပ်နဲ့ နင်လားငါလား ခဏခဏအမှားခံရတယ် ဆိုတာ ဟုတ်လားဟင်..
ကဘချော က သဘောကောင်း မနောကောင်း လူညိုချော ကြီး ဆိုတာ ကိုယ်တွေ့ မျက်မြင်ပါဘဲ။
ကိုပေ့ ကိုလဲ မမြင်ဘူးငြား ခင်မင်လေးစားပါ၏။ :-)
ကပေ စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖြစ်နေတယ်လား ။ ဒါဆို ခုတလော ဖတ်ဖြစ်နေတဲ့ ဖတ်လက်စ စာအုပ်တအုပ် ညွှန်းလိုက်မယ်။
ခြေရာပျောက်မြစ် ( ဦးသန့်မြေး – သန်းမြင့်ဦး) ရေးတာ။
ဖတ်ခဲ့ဖူးသမျှ သမိုင်းတွေ ရာဇ၀င်တွေထဲမှာ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ရတာ အကြိုက်ဆုံးပဲ။ နားလည်လွယ်လို့။
အတွေးနက်နက်နဲ့ ပညာသား ပါအောင် ဖွဲ့ထားတာ။မြန်မာ့ သမိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဦးနှောက်ဆေးပေးလိုက်သလို ပဲ။ အတွေး တချို့ အမြင်တမျိုး ရှုထောင့်တမျိုး ပေးသွားတယ်။
အရင်က သူကြီးကို သိပ်နားမလည်တတ်ဖူး။ ခုလည်း နားမလည်ပါဘူး ။
ကျမတို့ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကို လှစ်ခနဲ တွေ့လိုက်ရလို့ အမှန်တရားတခုအတွက် ၀မ်းနည်းမိတယ်။
ခုစာအုပ်က ဘာသာပြန်တဲ့ ။ မူရင်းလည်း မတွေ့ဖူးတာမို့ စာရေးသူအာဘော်ပါလား မပါလား မသေချာပေမဲ့ မပါလောက်ဖူးထင်တာပဲ။
မူရင်း အရေးအသားကိုလေ့လာချင်တာကြောင့် ရနိုင်မဲ့ လင့်လေး များ သိရင် သိသူများ ပြောစေချင်ပါတယ်။
ပိုစ့်နဲ့ မဆိုင်ပဲ ရေးချင်တာလာရေးသွားပါသဖြင့် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် ။
ဒေါ်ပု တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော်လက်ထဲ လဲ အဲဒီစာအုပ် ရောက်နေတယ်
တခြားအလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာကြောင့်ရော စာအုပ်ကထူ ကြောင့်ပါ
နဲနဲချင်းဖတ်နေရတယ် ဒီနှစ်ကုန်တာတောင် ပြီးပါ့မလား မသိ
ဟိုတစ်လောက် ဂျာနယ်မှာ တွေ့လိုက်တယ်
တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယတို့ဆုံရာ ( စကားလုံး အတိအကျမေ့နေလို့) လဲ ကောင်းမယ်ထင်တယ်
ကျမလည်း အကြမ်းပဲ ပြီးသေးတာ ။ သေချာအချိန်ယူပြီး ဖတ်ရအုန်းမှာ။ ကြာအုန်းမှာ ပြီးဖို့။
နောက်ထွက်မဲ့စာအုပ်က ဆုံစည်းရာ ထင်ရဲ့ ကျမလည်း မေ့နေတယ်။
မူရင်းနာမည်က Where China Meets India: Burma and the New Crossorads of Asia တဲ့။
နာမည်တောင် မှားရေးလိုက်တယ် သန့်မြင့်ဦးကို သန်းမြင့်ဦးဆိုပြီး ပြင်ဖတ်ပေးကြပါ။
ကျေးဇူးကြီးလှစွာသော ကိုဘလက်နင့် 
ကိုပေရေ …. လေးဘလက်ရဲ့ ပထမဆုံးပို့စ်ကတော့ ……..
SKY NET ကို ကျေးဇူးတင် ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ ……… ပထမဆုံး စတင်တဲ့နေ့က 3.8.2011ပါ …….. ။
ဟေ Best တွေဘာဒွေကို တန်းဖြစ်သွားတာပါဘဲလားဗျို့************** ကြည့်လုပ်ကြပါဗျို့
ဟေ့ မနာလိုခြင်း ထက်…ကြီးမားသော မကောင်းမှုရယ်လို့ မရှိနိုင်တယ်.
ရွာသားတဦး တင်ထားတာလေး ပေါ့နော် နော်
အင်မတန်ကြိုက်လွန်းလှလို့.. တရွာလုံး တပြည်လုံးဆောင်ထားသင့်လားလို့
ခင်ဗျားတို့ ချီးမြှောက်သလိုလုပ်ပီး မာန်တွေတက်နေကြတယ်
ဘာ ဘာ ဘာမှလည်း ဟုတ်ကြတာမဟုတ် ဟေး ဟေး
ဘာဒဲ့ ဒီမိုရွာဆိုပီးတောင် လုပ်နေကြသေး..ဟေ့ ဟေ့
ဒီမိုလုပ်လေ ပြဲလေရွာမို့. ဒီပြဲရွာလို့ခေါ်ကြပါလားဗျို့……….၀ိုးးးးး
CASPER ဆိုတာ ကလောင်ခွဲတစ်ခုပါ ကိုပေ….. သူ့ခမျာ ဒီတိုင်းပြောလျှင် … အားနာစရာတွေ ဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ ……. ထင်ပါရဲ့ … ။
ဘာဘာညာညာမပြောပဲ .. ဒီတိုင်းလွှတ်ပေးလိုက်ပါ …….. ။ လေးဘလက်ကို ဂုဏ်ပြုတာ ..ကြားထဲက ငထွားခါးနာနေတယ် … ခွိခွိ
အဒူလဲ သိချင်လျှင် ပရိုက်ဗိတ်ထဲ လာခဲ့ပါ …. ။
ဒေါ်အီးတုံးက ဘယ်သူဆိုတာဖော်ကောင်လုပ်ဦးမလို့လား။ သေချာစဉ်းစားနော်။ မှားလိမ့်မပေါ့။
အလဂါးရတဲ့ ဘဲဥတောင် ကိုးလုံးပဲ သထာရသလား ကြောင်ကြီးမဟေသီ မိုးစက်ဒေဝီထိပ်ထားလေးရဲ့။ ဦးကြောင်မှာ နှစ်လုံးပဲရှိလို့ မပေးဘဲနေရတာ…။
မိုးစက်ကို ဘယ်သူကခံယူနေတာလဲ ….. မိုးစက်လေးရေ မင်းရဲ့ မေတ္တာမိုးလေးကို ဘယ်သူ့ပေါ် ရွာမှာလဲကွယ် ……. မိုးစက်လေးကို ခံယူချင်တဲ့သူတွေ တော်တော်များနေတယ်နော် ……… မိုးစက် ညီမလေး မမမှာ မောင်လေးတစ်ယောက်ချိတယ် …… ပန်ပန်ခြစ်ကလေးကို ယောက်မတော်မလားလို့စဉ်းစားနေတာ ………
ချင့် သများကိုခေါ်သလား အူးကြောင် :grin:
မန်းဂဇက်မှာ ရေးတဲ့သူတော်တော်များများတော်ကြပါတယ်။၉၀% တော်ကြတယ်။သီးခံကြတယ်။မသိရင်ရှင်းပြပေးကြတယ်။မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် အပြည့်ရှိကြတယ်။ကူညီ ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် အင်တာနက်ဝင်တိုင်း ဒီဆိုက်ကို မရေးဖြစ်ရင်တောင် ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။သာမန်ရေးနေတဲ့သူတွေ တောင်တော်တယ်ဆိုတော့ တံခါးစောင့်ဆို ပြောဘွယ်မရှိတော့ပါဘူး။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မြန်မာ အငွေ့အသက်တွေ ကိုတွေ့ရပါတယ်။
အဖက်ဖက်ကတော်တဲ့ ဦးဘလက်ကိုကော၊ ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ဦးပေကိုရော လေးစားပါတယ်။
အဖက်ဖက်ကတော်တဲ့ ဦးဘလက်ကိုကော၊ ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ဦးပေကိုရော လေးစားပါကြောင်း
ကိုဘလက်ချောရဲ့ ပိုစ့်တွေဖတ်ရင်းတော့ ဂေဇက်မှာရင်းနှီးနေတာပါ။
လူချင်းတော့မဆုံတွေ့ဘူးပါဗျာ။ အခွင့်သင့်ရင်ဖြင့်တစ်ခါလောက်တော့ ဆုံချင်ပါရဲ့။
အယ် … သူတို့က ရွာမှာ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရှိသူတွေပဲ ….. တော့ ကပေ …… ကိုပြောင်ကြီး … ရှင်လည်း ရွာသူတွေကို အနုအရွစကားတွေနဲ့ မြူဆွယ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ……
ဒီပို့စ်က တစ်မျိုးကြီးပဲ၊ ဂုဏ်ပြုချင်တာလား၊ ဂုဏ်ပုအောင် လုပ်တာလား မသိဘူးရယ်၊ တစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးပဲ ဥာဏ်မမှီဘူးရယ်လို့ပဲဆိုပါတော့
ဖတ်ရှု အားပေးသွားကြတဲ့ စာဖတ်သူအားလုံးနဲ့ 
ကို ဇွဲမာန် (အင်းဝ)
ကို same kyaw
တို့ ကို လေးစားကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား
လေးစားထိုက်သူကို လေးစားပါ၊ အားပေးထိုက်သူကို အားပေးပါ၊ မီးလောင်ရာ လေမပင့်ပါနှင့်၊
ကျုပ် ပို့ စ်လေးထဲက
ကွန်မင့်များကို အဆက်မပြတ်လေ့လာ ဖတ်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါနဲ့ မီးက ဘယ်မှာ လောင်နေတာများပါလိမ့်
မီးက လူတိုင်းရင်ထဲမှာ လောင်မှန်းမသိလောင်နေတာမောင်ပေရဲ့။
သူများမီးလောင်တာကို အလွယ်တွေ့နိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်၇င်ထဲမှာလောင်နေတဲ့မီးကတော့
ဦးပေရေ ကို/မ လင်းလင်းတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယောက်ျား၊ မိန်းမ မကွဲပြားတဲ့လူလို့ ခံစားရလို့ပါ။ လင်းလင်းက Lady ပါ။ အသက်သုံးဆယ်အရွယ် ရင်ကြပ် အဲ ရင့်ကျက်တဲ့ အမျိုးသမီးပါ။
ဒီမယ် မောင် သရဲလေး မီးသတ်တာ လဲ သတ်ပေါ့ ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုပါတယ်။ နည်းပညာ လည်းလိုပါတယ်နော်။
နားမလည်တဲ့ကိစ္စရယ်လို့မရှိပါဘူး******* နားလည်ဖို့ပဲလိုပါတယ် ရွာကအပြင်လူ ၀င်လာပီးဖြိုခွဲစရာမလိုတော့ဘူးးး၊ ကိုယ်စီပါဝါ မာနတွေပြိုင်ရင်း မြောင်းထဲကို ထိုးဆင်းနေတာပဲ..
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ
အမှန်ပြောရင် မောပြန်ရတယ်ဆိုလား၊ ကြားမိတာလေးနော်၊
ကိုကတ်စ်ပါ က xxxxxx
မရို့ စ်မင်း ကလဲ xxxxxx
ရွာသူားတွေအိုင်ပီလိပ်စာ.. အီးမေးလ်.. ရေးမတင်ပါနဲ့နော…
အနော်လဲ ဝေခွဲရခက်သွားလို့ ပါ
နောက်ကို အဲဒါတွေ မတင်တော့ပါဘူး ခင်ဗျ
ကျန်သွားလို့ လေးစားထိုက်သူတွေအားလုံးကိုသမီးလေးစားပါတယ်ဒါပေသိ ဘဝင်လိုလိုသခင်လိုလိုဆို၇င်တော့ဆော၇ီးပဲ…….
အဲ့ထဲမှာ သများတို့ပါဘူးနော် ချယ်ချယ်လေး
နှာဘူး ဥဥ ဘာချယ်ချယ်လေးလဲ …….. ရှင့်ရဲ့အကန့်လေးခုမှာ ကျွန်မရှိနေသေးလား Confirm လုပ်ပေးပါဦး ….
နေဘူးအေ …… ဖယ်စမ်းပါ …. ကိုယ့်နေရာကိုသူများဦးတာ ဘယ်သူကခံချင်မှာလဲ …. မုန့်ကိုသာဝေမကျွေးဘူး အချစ်ကိုသာဝေစားမယ် …….
(((((ဝေးးးးးးးးးး လေးဘလက် ဘေးဘလက်……ဒါမှ တို့ လေးဘလက် လေးဘလက်)))))
လေးဘလက်ရဲ့ ညီငယ် အာဂ
သည်ပိုစ့်ကိုရေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့် စိတ်ကူးက
တစ်ဘက်သားက ကိုယ့်ကို ယုံကြည်ခင်မင်တယ်ဆိုတာနဲ့
ကိုဘလက်ချောရဲ့ ပိုစ့်တွေကို ပြန်လည်စုစည်းပေးလိုက်တာပါ
ကိုအာဂ တို့ကို ဖတ်ရှု ကွန်မင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ
လေးဘလက်က အရင်ထဲက လေးစားတဲ့စာရင်းထဲမှာပါပြီးသားလေ… အရင့်အရင်လူတွေလည်း ရှိကြပါသေးတယ်။ သူတို့လည်း ခုဘယ်တွေရောက်နေလဲမသိဘူး။ လေးဖက်ကတော့ ဂေဇက်ရဲ့ တံခါးမှူးကြီးပေါ့။ လေးစားပါတယ်ရှင်။
မန္တလေးကို ငါလွမ်းမိ လို့ပဲ အငဲလိုသာ ဟဲမိတော့တယ်။
အခု ကိုဘလက်ကြီးကို ဖုန်းပြန်ဆက်နေတာ မအားသေးပါပဲ။ စောစောက သူခေါ်တော့ကိုယ်ကမအားဖြစ်နေ။
အကိုကြီး က မန်းတလေး ကို ရောက်ရဲ့ သားနဲ့ 
အနော် လဲ မိန်းခလေးတွေနဲ့ အတူ သီချင်းဆိုတတ်ပါတယ်နော
ဒါဆို အန်ကယ်အူးပေ ကဘီဘီချိန်မှာဖတ်ဖို့ဆိုပြီး ပို့စ်တွေတင်ဗျာ အနော်အားပေးနေမယ် ဒီပုံအတိုင်းဆို တို့ရွာတံခါးစောင့်တစ်ဦးတိုးလာတာပေါ့ ဦးဘလက်ကနေ့ဖက် ဦးပေကညဘက် မကောင်းဘူးလား ရွာကြီး ပိုပြီးလုံခြုံသွားတာပေါ့ ခေတ်ကသိပ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးရယ် သဘောတူပါသလား … သဘောတူရင် အစိမ်းလေးတွေမြင်ချင်ပါတယ် …. ညွှတ်ညွှတ်ညွှတ်
ကဖိုးထောင် သများ အစိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်ချင့်
ချစ်စ ဆရာကြီး ဆိုတာ ကိုပေါက် ရဲ့နောက်ထပ်ကလောင်ခွဲလို့ပြောတယ်လို့ အသံကြားလိုက်ရပါတယ်.။
ကိုပေါက်(မန္တလေး)ဆိုတဲ့ နာမယ်တစ်ခုထဲကိုဘဲ ဆိုက်ပေါင်းစုံမှာရော ဖေစ်ဘုတ်မှာပါ အသုံးပြုပါတယ်။.
သူများကို ထောက်ခံဘို့ တုန့်ပြန်ဘို့ရာ ကျနော်အတွက် ကလောင်ခွဲ ကလောင်ဝှက်မလိုပါ။
အမှန်အတိုင်းပြောရင် လေးဘလက်ရဲ့ စာတွေကို အများကြီး မဖတ်ဖူးပါဘူး။ မဖတ်ဖူးဘူးဆိုတာကလည်း မွန်မွန်ကိုယ်တိုင်က ရွာထဲမှာ ပေါ်တော်မူ ဖြစ်ဖြစ်နေတာပါတယ်။ ချိုပေါ့ကျ တွေကိုတော့ အမြဲတမ်းစောင့်ဖတ်ပါတယ်။ ကွန်မန့်မပေးဖြစ်ရင်တောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလည်း ကိုပေပေးထားတဲ့ လင့်တွေကိုဖွင့်ပြီး စာတွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်…။
ဂုဏ်ပြုဖို့ မမေ့ပါကပေရေ။ ဂုဏ်ယူစရာ ရွာရဲ့ဂုဏ်ဆောင် ဘဘဘလက်ကို ရွာသူား တိုင်းလေးစားကျအားကျပြီးသားပါ။ ကပေ ကအမှတ်တရပို့စ်လေး တခုနဲ့ဂုဏ်ပြုလိုက်တော့ ထင်သာမြင်သာဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဂုဏ်ပြုသူရော ဂုဏ်ဆောင်သူရော ကိုလေးစားပါတယ်။
ကိုဖိုးထောင်ခင်ဗျ ဘီဘီအချိန်အတွက် အားကိုးပါရစေနော
ကိုပေါက် က ဘာဆိုင်လို့ ချစ်စဆရာဖြစ်သွားတာတုန်း ကိုပု ဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်
မွန်မွန်ရေ ဖတ်ကြည့်ပါနော ကျေးကျေးဘာ